IRenault isikhiphe iSandero Stepway Plus | Isolezwe
IRenault isikhiphe iSandero Stepway Plus
ezezimoto / 2 August 2019, 1:28pm / FANELESIBONGE BENGU
NGESIKHATHI iRenault Sandero ifika eNingizimu Afrika ngo-2009, yafika yazitholela indawo ezinhliziyweni zabathengi kuleli.
Ngaleso sikhathi yayikhiqizwa embonini yakwaNissan eRossyln, ePitoli kwazise lezi zinkampani zombili zinobudlelwano bokusebenzisana.
Kuthe ngo-2011 kwethulwa iStepway osekudayise angaphezulu kuka-26 000 eNingizimu Afrika.
Muva nje bethule iStepway Plus njengoba beyipheka ngomhluzu wenye kwaRenault. Ingena esikhaleni seDynamique. Umehluko kunejwayelekile awutheni kangako ngaphandle. Ihluke ngamarimu angu-16 inch anemibala emibili, izibuko zimnyama futhi ezinolayini obomvu base bengeza imibala emisha emithathu okungobomvu, osiliva, nonsundu.
Ngaphakathi into efike yangigqamela yi-touchscreen engu-7 inch. Bebengafuni idlulwe wumncanyana wakwabo iKwid njengoba nayo beyenze yakwazi ukuthi iveze iselula nge-Apple CarPlay noma nge-Android Auto. Ngaphandle kwalokhu kudlala umsakazo okanye uveze inkombandlela noma ingemuva njengoba inekhamera eyenza impilo ibe lula uma paka.
Ngaphandle kwalokhu inamawindi kagesi. Angazi kungani ibhathini lokuvula awangemuva bengalifakanga esicabheni somshayeli njengawangaphambili. Kunalokho aphakathi nendawo. Ine-cruise control, izihlalo zesikhumba ozifaka uma uthanda futhi izibuko zasemaceleni uzihlela ngogesi.
Ngesikhathi ngithatha ibanga elide ingalo bengiyiphumuze endaweni yayo ephakathi nendawo.
Abagibeli akekho noyedwa oke wakhala ngesikhala ngenxa yokuvuleka kwayo. Nebhuthi injalo inesikhala esikhulu ilayisha izimpahla eziningi kwazise singu-292 litres. Uyasengeza uma ufuna ngokulalisa izihlalo.
Ngaphansi kwenjini awukho umehluko ngoba kukhona engu-0.9 turbo kaphethroli enamandla angu-66 kW netorque engu-135 Nm. Isebenzisa * -gearbox oyi-5 speed oshintshwayo. Bathi ukusuka ku-0 iye ku-100km/* kuyithatha imizuzwana engu-11.1 kanti ijubane elikhulu ngu-169 km/* .
Vese akusiyo imoto yokugijima lena kodwa iyanyakaza yona. Kubuye kuvuke ukuthi injini incane ngoba ifuna unciphise amagiya uma kuke kwathi ukunyukela noma ufuna ukubamba ijubane udlula enye imoto. Ifuna uthi ukuqinisa unyawo emafutheni.
Okumnandi kakhulu ngale njini ukuthi iyonga kuphethroli. Ngebanga lika-100km bathi iphuza amalitha angu-5.4. Ngesikhathi ngihamba ngayo ibidla angu-7.1.
Uma usuka endaweni enyukelayo ithi ukuzibamba ukuze ingahlehli. Lokhu kusiza kakhulu, ikakhulukazi kule genge esengamathwasa ekushayeleni. Ngaphandle kwalokhu ine-Anti-Lock Braking System (ABS) ne-Emergency Brake Assist (EBA) kanjalo ne-Electronic Stability Programme (ESP).
Renault Stepway Plus R213 900 (incl. VAT)
Ongakufaka yizihlalo zesikhumba: R10 088
Ifika ne-service plan yeminyaka emibili noma * -30 000km newarranty yeminyaka emihlanu noma * -150 000km.